UBukumkani BukaThixo—IBhayibhile Ifundisa Oko Buza Kwenzela Kona
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMongolia IsiMoore IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Mhlawumbi uye waqaphela kula manqaku adluleyo ukuba uBukumkani bukaThixo bubaluleke kakhulu kumaNgqina kaYehova. Kusenokwenzeka ukuba uye wachukunyiswa nangamathemba ekamva ekuthethwe ngawo. Kodwa usenokuba uyazibuza ukuba aziyontsomi na ezi zinto.
Kuhle ukulumka ungakhawulezi ukholelwe yonk’ into oyivayo. (IMizekeliso 14:15) Ukulumka kwakho kungafaniswa nokwamaBhereya amandulo. * Xa ayeqala ukuva ngeendaba ezilungileyo zoBukumkani, awazange abe ngoovuma-zonke. Kunoko, azihlolisisa ngenyameko iZibhalo ukuze abone ukuba “zinjalo kusini na ezo zinto.” (IZenzo 17:11) Ngamany’ amazwi, amaBhereya ayejonga ukuba ezo zinto ayeziva zazikhona na eZibhalweni. Ekugqibeleni, aye azibonela ukuba ezi ndaba zazisuka ngqo kwiLizwi likaThixo.
AmaNgqina kaYehova ayakumema ukuba nawe wenjenjalo. Angakuvuyela ukufunda nawe iBhayibhile, ukuze uzihlolisisele ngokwakho ukuba izinto ezifundiswa ngamaNgqina kaYehova ngoBukumkani bukaThixo zisekelwe eBhayibhileni kusini na.
Esi sifundo seBhayibhile asizi kukunceda ufunde ngoBukumkani bukaThixo nje kuphela, kodwa singakunceda uphenduleke nakweminye yeyona mibuzo ibalulekileyo unokuyibuza.
Kutheni uThixo evumela ezi ntlungu zingaka?
Yintoni imfihlelo yolonwabo lwentsapho?
Ngaphezu kwayo yonke loo nto, ukufunda iBhayibhile kuya kukunceda ‘usondele kuThixo.’ (Yakobi 4:8) Ngokuya usondela kuThixo, uza kuye ufunda ngezinto obuya kukwenzela zona uBukumkani bakhe—kungekhona ngoku kuphela, kodwa ngonaphakade. UYesu wathi xa wayethandaza kuYise: “Oku kuthetha ubomi obungunaphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, wena ukuphela koThixo oyinyaniso, nangalowo umthumileyo, uYesu Kristu.”—Yohane 17:3.
^ isiqe. 4 IBhereya yayisisixeko esasikwiMakedoni yamandulo.
Kutheni UBukumkani BukaThixo Bubalulekile Nje Kule Ntwazana?
Intwazana eneminyaka elishumi, uFolake, yabhala isincoko esikolweni esinomxholo othi “Eyona Nto Ndiyithandayo Kweli Hlabathi.” Yabhala ngesizathu sokuba ikuthanda ukuchazela abanye ngoBukumkani bukaThixo.
Yathi: “UBukumkani bukaThixo bungurhulumente wokwenene. Kodwa abubonakali, ngoko awunakububona—nokuba unganxiba izipeksi!”
UFolake waqhubeka ebhala ngeentsikelelo zoBukumkani angxamele ukuzibona. Wabhala nangezinye zeengxaki eziya kupheliswa buBukumkani, esithi: “Ndiba buhlungu xa ndibona abantu abangenamakhaya abahlala ezitratweni, nabantwana abalamba bade bafe kumazwe ngamazwe ehlabathini.” Wongezelela wathi, “Kodwa ndiye ndivuye xa ndifunda uIsaya 65:21.” Xa ithetha ngendlela abantu abaza kuhlala ngayo xa belawulwa buBukumkani bukaThixo, le vesi ithi, “Baya kwakha izindlu baze bahlale; batyale izidiliya baze badle isiqhamo sazo.”
UFolake wathi ukwakhangele phambili kwixesha laxa uThixo eya kusebenzisa uBukumkani bakhe ukuphelisa konke ukugula. Kwisincoko sakhe wacaphula iSityhilelo 21:4, esithi uThixo “uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona.” Ekuqukumbeleni isincoko sakhe waphinda wagxininisa ukuba ukuthetha ngoYehova nangoBukumkani bakhe yeyona nto ayithandayo ehlabathini. Kucacile ukuba, uBukumkani bukaThixo bubalulekile kule ntwazana!